Geeraar calaal ah
Sidee loo qoraa geeraar calaacal ah oo soo jiidasho leh? Jawaabtu waa: Si, fudud. Halkani kuma baran doontid oo keliya geeraar jaceyl oo calaacal ah ee sidoo kale waxaad ku baran doontaa, geeraar jeceyl oo amaan ah, geeraar daadis ah, erayo jacayl qiiro leh, fariimo jaceyl ah oo soo jiidasho leh.
Inta aanan uguda galin sida loo qoro geeraar calaaacal oo soo jiidasho leh waxaan rabaa in aan halkaan kula wadaago sida loo qoro erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh kuwaasoo akhristayasheena sharafta badan ee ku xiran erayojaceyl.com nooga yimid.
Haddii aad adiguna ka mid tahay waxaad ka akhrisan kartaa halka hoose, adigoo riixayo oo keliya.
Geeraar Jaceyl oo soo jiidasho leh
Sida loo qoro fariimo jaceyl ah oo soo jiidash leh
Geeraar Jaceyl oo calaacal ah
Ku bilaaw sidaan:
Qalbi Iga gudoon salaan sidato wanaag, sarifaneyso xishood, Sahmineyso jaceyl, soo dhaweyneyso guur, saadaalineyso aroos, sifeyneyso xumaan, sugeyso sacabo furan iyo kalgacal Salaan kadib, waxaan kuu soo dirayaaa fariintani xambaarsan uduga jaceylka iyo waaxyada aduunka. Waxaan ogaaday in jaceylku macaan yahay noloshuna macno leedahay taasina waxa ay timid markaan adi ku jeclaaday.
Maalmahaan oo dhan waxaan dareemay keli ahaansho, murugo cidlo ah sababtuna ma ahan wax kale ee waxaan dhinaceyga ka waayay muraayadii qalbigeyga. Ma ogtahay inta aad garabkeyga joogtid waxa ay iila mid tahay in la isiiyay dunida farxada taalla oo idil, taasii waxa ay itusineysaa in aysanba jirin farxad iga ma aqan marba haddi aan adiga ku heysto.
Waxaan rabaa in aan kaa raali geliyo wax walbaa oo dhacay, qalad qalad laguma saxo ee waxaa lagu saxaa wanaag, maantana waxaan qirtay qaladkeygii. In aan qalad galana waxaan u nahay bini,aadam marka qalbi iga raali noqo.